Kenya : Soomaaliya “waxay isku dayaysaa in ay naga xidho suuqa jaadka oo shuruud uga dhigto muranka badda” | Berberanews.com
Home WARARKA Kenya : Soomaaliya “waxay isku dayaysaa in ay naga xidho suuqa jaadka...
Kenya : Soomaaliya “waxay isku dayaysaa in ay naga xidho suuqa jaadka oo shuruud uga dhigto muranka badda”
Dowladda Kenya oo ka hadashay xanibaadda saaran jaadka Kenya ee la geeyo Soomaaliya ayaa sheegtay in Dowladda Soomaaliya arrinta jaadka shuruud uga dhigtay muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto oo la hadlay mid kamid ah telefishenada maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ugu baaqeen in la kala saaro arrinta badda iyo ganacsiga labada dal.
“Waxaa dhacday xoogaa is-fahan la’aan ah oo u dhaxeeya dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya sababa aan xiriir la lahayn arrimaha jaadka. Waad ogtahay arrimo la xiriira xudduudda ayay maxkamad noo geeyeen. Sidaa awgeed, waxay isku dayayaan in ay naga xiraan suuqa jaadka si ay shuruud uga dhigaan muranka xudduudda ee nagala dhaxeyso.”
Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka Kenya ayaa sheegay in xal u helidda xayiraadda jaadka ay la sugi doonaan dowladda cusub ee imaan doonta, maadaama sida uu sheegay Soomaaliya xilligan ay ka jiraan arrimo doorasho.
“Waxaa ku soo wajahan doorasho. Waad ogtahay marka ay doorasho jirto, xaaladda ayaa aad u kacsan tahay. Dadkii ay ahayd in ay go’aan ka gaaraan dhibaato ayaa haysata oo ma jiro qof doonayo in uu go’aan cad qaato, waayo cod ayay raadinayaan.”
“Marka waxaan rumeysannahay in haddii arrinta doorashada ay dhammaato dalka Soomaaliya, waxaa noo suurtageli doontaa in aan helno dowlad aan la hadalno oo aan soo celinno suuqii qaadka oo aan horumar ka gaarno haddii aanu nahay Kenya. Tan kale waxay tahay waa muhiim in aan helno badeecooyin kale oo aan qaadka uga maarmi karayno.” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Kenya.
William Ruto ayaa sheegay “Dhanka dalka Ingiriiska, waxaan qeyb ahaan ku guuleysannay in aan suuq uga helno qaadka. Caqabaddu waxay tahay tan aan haatan kala kulmeyno dhanka Soomaaliya oo ah suuqii qaadka ee ugu weynaa. Arrintaasi dhawaan ayay adkaatay.”
Wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay inay socdaan wadahadallo lagu xallinayo khilaafka hareeyay jaadkii ay Kenya geyn jirtay Soomaaliya.
“Haseyeeshee, hadda waxaa soconaya wadahadallo si aan xal ugu helno arrintaasi oo aan u kala qaadno arrinta dacwadda badda oo aan gooni u dhigno iyo arrinta ganacsiga u dhaxeeya labadani dal. Dhibaatada ugu weyn ee hadda soomaaliya ka jirta ayaa ah in hadda qof kastaa uu cod raadinayo.”
Previous articleXildhiban ku baaqay in la maxkmadeeyo Maxamuud Xaashi
Next articleBurco: Hanti-dhawrka oo xabsiga dhigay shaqaale maaliyadeed